IINCWADI EZILI-10 WONKE UMFAZI EKUFUNEKA EZIFUNDILE KUBE KANYE KUBOMI BABO - IINCWADI
Iincwadi ezili-10 Wonke uMfazi ekufuneka eziFundile kube kanye kubomi babo
Ndiyakuthanda ukufunda iincwadi. Ngapha koko, ndazisiwe ngeencwadi ndisemncinci kakhulu. Njengoko ndandikhula, ndandizithanda kakhulu iincwadi. Kule mihla, ayikuko ukuba ndifumana ithuba lokufunda iincwadi mihla le. Kodwa ndingathanda ukuphosa kula maxesha apho bendidla ngokungqengqa ebhedini yam ndinencwadi kunye nepakethi yamashwamshwam. Ndizityhilele kwiindidi zeencwadi zamabali, kwaye uninzi lwazo lubhalwe entliziyweni yam. Uluhlu apha luthetha ngeencwadi ezithile, ezingabhalwanga kuphela ngabafazi beenkcubeko ezahlukeneyo, imvelaphi, okanye uluntu, kodwa luxhobisa owasetyhini ukuba akwazi ukuzimela kwaye avakalise awakhe amalungelo. Nalu uluhlu lweencwadi ezili-10 ezimangalisayo ekufanele ukuba wonke umntu wasetyhini afunde kube kanye ebomini bakhe.
nguLouisa May Alcott
Abafazi abancinci bayinto ethandwayo yenkulungwane ye-19 efundwayo namhlanje kwaye ethandwa ngabo bonke, ngakumbi abasetyhini abavela kwihlabathi liphela. Inoveli imalunga noodade abane abakhula kunye, malunga nothando losapho, malunga neembambano zabantakwabo, malunga nokuzikhangela, malunga nothando kunye nobudlelwane, intlupheko, ubutyebi, izinto eziphambili ebomini, kwaye okona kubaluleke kakhulu, kugxile kwinkululeko yabasetyhini. Emva ngelo xesha, ibhinqa eliselula lalingenakukhuphisana namaqabane alo angamadoda. Le noveli iyaphula loo stereotype.
Shicilela | eBook | Incwadi yeencwadi
Le ncwadi ithathwa njengeyona nto uyithandayo ngabantu abaninzi basetyhini. Omnye wemisebenzi edume kakhulu kaJane Austen, Ikratshi kunye nokuCalucalula kufundisa izifundo ezibini ezibalulekileyo ebomini ekufuneka zifundwe yiyo yonke intombazana: ukubonakala kokuqala akusoloko kulungile, kwaye wonke umntu ufuna amathuba wesibini. Ikwafundisa ukuba xa usemathandweni, ikratshi kufuneka lithobekile, kwaye ucalucalulo kufuneka luphele.Intengiso
iingcebiso kulawulo lwexesha kwiingcali
UMatilda yintombazana encinci engakhathalelwanga lusapho lwayo. Ukrelekrele, kwaye unetalente kakhulu. Kamva kwafumanisa ukuba wayenamandla omlingo. Kwaye la mandla akhuthazwa ngakumbi ngutitshala onobubele kwiklasi yakhe. Emva koko, uMatilda ulawula ubomi bakhe, kwaye uthatha isigqibo ngekamva lakhe. Le noveli yabantwana ibalulekile emfazini kuba ifundisa umntu wasetyhini ukuba unexabiso elingaphaya kwento ebonwa ngabanye kuye.
Iklasikhi entle, le noveli ijongana ne-protagonist yeminyaka emi-6 eneenkwenkwezi njengophawu lobufazi, kwaye ngubani owalayo ukwamkela imigangatho yoluntu, endaweni yoko utyhalela kuzo zombini iintlanga kunye nokulingana ngokwesini. Incwadana isetyenziswe ngexesha loxinzelelo olukhulu, kwaye kude kube ngumhla, izifundo zobomi be-protagonist ziyasebenza kubafundi bemihla yanamhlanje.Intengiso
uvela phi umona
Idayari yentombazana encinci
Ngexesha lokuthimba i-Nazi eNetherlands, amawaka amaYuda abaleka azimela. U-Anne Frank wayengomnye wabo. Kwaye yintoni emenza ukuba akhetheke ngakumbi, kwaye athandwe zizigidi zabantu kwihlabathi liphela kungenxa yedayari awayibhalayo ngexesha lokufihla kwakhe. Le dayari idumileyo isixelela, ngakumbi abafazi abancinci kwihlabathi liphela, malunga neenkcukacha ezincinci zentombazana encinci ekhulayo: ukuqonda okuqhelekileyo kwamantombazana, ubuhlobo namanye amantombazana, ukutyumza amakhwenkwe, indlela ukubaluleka kwembali okubuchaphazele ngayo ubomi bakhe -coaster, kunye nesizungu sakhe.
Ndiyazi ukuba kutheni i-Cage Bird icula
UMaya Angelou wabhala le ngxelo ngobomi bakhe ngo-1969. Le noveli ngumzekelo oqinileyo wendlela umfazi anokuma ngayo omelele ngaphandle kokungabikho kokusesikweni. Ukulwa ubuhlanga, isini, kunye nokwenzakala buqu, le ncwadi ibonisa indlela ekulula ngayo ukuyifaka ngaphakathi le mikhosi mibi, kunye nendlela anokuba namandla ngayo umfazi ngokuxhathisa.Intengiso
zisifudumise iindawo zokufikisa ngoDisemba
U-Ella ukrelekrele ngokungaguqukiyo, ulumke kwaye unomdla. Ufana neCinderella yosuku lwangoku ngokujija. Unenkosana enomtsalane ethandana nayo, kwaye ayinguye kodwa uElla, okwaziyo ukuzisindisa. Le ncwadi ibonisa iqhawekazi elizimeleyo elizimeleyo elwa nesiqalekiso sokuthobela i-ans alidingi knight kwizikrweqe zesilivere ukumhlangula.
NguGail Carson Levile
NguPam Munoz Ryan
Le ncwadana yabadala isethwe ngexesha loxinzelelo olukhulu. Indawo ibekwe eMexico naseCalifornia. U-Esperanza yintombazana esisityebi esokola xa usapho lwayo luwela kwintlupheko Ibali libonisa ukuqala kwamantombazana aqala ukufunda ngobomi babaphambukeli, ukugqabhuka kwamasiko, kunye nomceli mngeni wendlala.
eyona ndlela ilungileyo yokuzilolonga kwabaqalayo
Ngubani owathi abafazi abanako ukuhlekisa? Ewe, umhlekisi uTina Fey ngokuqinisekileyo uyayazi indlela yakhe kwihlabathi ukubonisa ukuba abantu basetyhini banokuhlekisa. Lo mlando ohlekisayo uphonsa ukukhanya kwizifundo ezibalulekileyo malunga nobufazi kunye nomzimba womzimba, into ekufuneka wonke umntu wasetyhini ayifunde ngayo.
unikwe esi sicatshulwa sobomi
UMeggie noyise banamandla akhethekileyo: xa befunda ngokuvakalayo, abahlali abathandayo bangena kwihlabathi lokwenyani. Ngobunye ubusuku, xa utata wakhe wayefunda incwadi ngokuvakalayo, umguvela wangena kwigumbi lakhe lokuhlala, kwaye wamshiya uMeggie engenandlela-nye ngaphandle kokulwa naye, asindise usuku. I-Inkheart yincwadi emalunga nokuzonwabisa ngefantasy, malunga nobufazi obukrakra, malunga nokucinga, kwaye okona kubaluleke kakhulu, ngobomi.
Incwadi ingaba ngumhlobo obalaseleyo womfazi. Iincwadi zinokukhuthaza umntu ukuba enze izinto ezininzi kangaka, oyise iimvakalelo, zimenze umntu aqonde ukuma kwakhe kweli hlabathi, kwaye ke, zimenze umntu azithembe, kwaye aphefumlelwe ukuba azimele, kunye nelizwi lokulingana ngokwesini. Umfazi kufuneka afunde intaphane yeencwadi ukuze aqonde ngcono umhlaba, kunye nesikhundla sakhe kuwo.
iindlela zokuphucula ubudlelwane bakho
yintoni eyenza umntu onwabe
uhlala njani nomntu ongathandekiyo
kutheni kufuneka ndisebenze
Umsebenzi Wohlahlo Lwabiwo-Mali Itekhnoloji Yeapp Indlela Yokuphila Oyithandayo Ibhalansi Yobomi Ubugcisa